अ’नौठो घ’टना ! सात महिनाकी बालिकाको पेटमा ८ महिनाको ब’च्चा” – Jagaran Nepal
०८ आषाढ २०७८, मंगलबार
अ’नौठो घ’टना ! सात महिनाकी बालिकाको पेटमा ८ महिनाको ब’च्चा”
Jagaran Nepal आइतबार, आषाढ ०७, २०७७
नयाँ दिल्ली। नेपालको सीमावर्ती भारतको बिहारमा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । चिकित्सकहरुले एक ७ महिनाकी बालिकाको पेटबाट ८ महिनाको बच्चा मृ’त निकालेका छन् । चिकित्सकहरुले लाखौं व्यक्तिमा एक जनामा यस्तो स’मस्या हुने बताएका छन् । बिहारको बक्सर जिल्लाका मो’हम्मद मा’इद्दीनले आफ्नी ७ महिनाकी छोरीको पेट दु’खेको गु’नासो लिएर अस्पताल पुगे ।
बालिकालाई अस्पतालले भर्ना गर्यो । सि’टीस्क्यान गरेर हेर्दा बालिकाको पेटमा भू्’रण देखियो । बालिका ७ महिनाकी थिइन् । बालिकाको श’ल्यक्रिया गर्न एक महिना लाग्यो । आइतबार चार जनाको टोलीले बालिकाको श’ल्यक्रिया गरेर ८ महिनाको मृ’त भू्’रण निकाल्यो । बालिकाको जन्म हुँदा पेटमा एउटा ड’ल्लो थियो । त्यो बि’स्तारै बढ्दै गएको थियो । बिस्तारै बालिकाले पि’साब फे’र्नसमेत स’मस्या भयो ।
त्यसपछि उनलाई बावुले अस्पताल लगे ।चिकित्सकले अ’प्रेशन गर्ने सल्लाह दिए । पटनाका बा’लरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप नन्दनले बालिकालाई एक महिना पहिले भ’र्ना गरिएको र श’ल्यक्रियापछि अवस्था सुधार हुँदै गएको बताए । भु्’रणमा हात, खुट्टा सबै बिकास भैसकेका थिए । तर बच्चा भने म’रेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो सम्बन्धि समाचार प्राथमिकताकासाथ लेखेका छन्।
नाेटः याे समाचार भारतीय प्रमुख सञ्चारमाध्यम आजतकले सार्वजनिक गरेको हाे ।
धेरै नै भाग्यमानी हुन्छन् यी ६ राशि हुने युवतीहरु, भेट्छन् असिमित प्रेम गर्ने पति !
४ महिना पहिले लगानी गर्दा साथीले पागल भने, ४ महिनामै डगक्वाइनबाट करोडपति
किन हुन्छन् हरेक ब्लेड बीचमा एउटै डिजाइन ? यस्तो छ रहस्य…
यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाईमा पनि छ की ?
तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य ? जान्नुहोस्
घोर कलियुग : २ सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, प्रहरीमा प’क्रा’उ’पछिको बयान सुन्दा दुनियाँ चकित
कसरी आयो मेलम्ची खोलामा इतिहासकै भीषण बाढी ? हेलिकोप्टरबाट यस्तो देखियो (भिडियोसहित)
त्यो दु’र्घ’ट’ना जसले नीशाको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी गरायो
दिल्लीको अपोलो अस्पतालवाट पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्यका बारेमा आयो यस्तो जानकारी
कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएपछि जारी लकडाउन थप एक महिना लम्ब्याइयो
जुवाको खालबाट प’क्रा’उ परेकी किशोरीको बयान, ६ जना युवक थिए संगै